Nomuthi "Liv.52" - indlela oluphelele odabuka yemvelo, okuyinto zenziwa kusukela isitshalo ezikhishwe kwezokwelapha. nomphumela oqabulayo we nomuthi "Liv.52" kufinyelelwa ngenxa izakhiwo izingxenye zemvelo. Uphenyo kodokotela neziguli mayelana izidakamizwa ogxile omuhle. Kulesi sihloko sibheka imithi ngaphezulu.
Khiqiza nomuthi "Liv.52" (izinkomba ukusetshenziswa uzobe kuchaziwe ngezansi) ngesimo amaphilisi noma lehla ekuphathweni ngomlomo. Umuthi has kokwakhiwa okulandelayo: Chicory, amakhephabheri ayaqhuma, yensimbi oxide, abamnyama nightshade, emagxolweni Terminalia Arjun, nekasiya imbewu imbiza Western, Yarrow, Tamarix Gali futhi iphathwa phezu umusi ezikhishwe of izitshalo ezifana eklipta ezimhlophe filantus niruri, elikhulu berhaviya , tinospora serdtselistnaya, isithombo, izidakamizwa embliki, plumbago eCeylon, Yeumbeul currant, mirobalanovoe isihlahla, Fumaria officinalis.
Futhi ekhona nezinsizasenzo ekwakhiweni: MCC, magnesium stearate, sodium carboxymethylcellulose, sodium croscarmellose.
Medicine "Liv.52": izinkomba ukusetshenziswa
Lokhu ukulungiselela isetshenziselwa:
isibindi zesintu-hepatitis enobuthi noma viral;
ezingamahlalakhona amafutha gepatoze;
dyskinesia biliary ;
isibindi umsebenzi iziyaluyalu ezinganeni;
kwehle ukudla kwesisindo ezinganeni.
Ukulungiselela "Liv.52" lisetshenziswa prophylactically e izifo ngokukhukhumala kwentamo isibindi. Kuyinto ngempumelelo e okwelapha, amakhemikhali nemisebe ukulimala isitho.
Ukuze kwandiswe ukumelana umzimba lapho izilonda hepatotoxic, ukuze ukuphuthumisa ukuphulukisa ngemva izifo ezingathi sína kwababhemayo noma ukungenelela kuhlinzwa futhi wasebenzisa umuthi "Liv.52". Uphenyo kodokotela kanye neziguli uqinisekise ekulenzeni libe namandla. Ingabe izinzuzo ezilandelayo zomuthi:
It has eqeda ukuvuvukala futhi isenzo hepatoprotective (ikhuthaza zokuvikela kanye nokususa kokusebenza kwesibindi);
inethonya antitoxic futhi choleretic, umphumela izidakamizwa siqondiswe esesuthi okuthuthukisiwe ukugaya, ushukunyiswa yiwo lula ukudedelwa umoya ovela emathunjini;
nge umonakalo utshwala ukuze kwesibindi ngenxa yesenzo umuthi ukususwa esasizosheshisa ka acetaldehyde;
ezingamahlalakhona ukuluthwa utshwala nomuthi kuvimbela kokuziphatha lipids esibindini, sizonikeza Ukuvikelwa baso engibukhulumile carbon tetrachloride ;
lapho predtsirroticheskih uthi imithi eyeka ukuthuthukiswa isifo sokusha kwesibindi iphinde ivimbele umonakalo isitho;
isenzo nomuthi siqondiswe ukukhishwa amaseli isibindi, ukubuyisela impahla yayo obusebenzayo, ukukhuthazwa amaprotheni zamagama;
lapho ukukhathala izidakamizwa ukukhula komzimba kudaleke hematopoiesis.
Ngaphezulu kwalokho, ngenxa umphumela nomuthi "Liv.52" isamba evamile plasma amaprotheni kulawulwa isilinganiso albumin futhi globulin. Ngaphansi isenzo zomuthi ufinyelela evamile ububanzi plasma ezingeni transaminases, triglyceride, cholesterol, izimpawu ukuncipha dyslipidemia, izinkomba encishisiwe ane-alikhali phosphatase futhi bilirubin, isibindi uyakwazi futhi lifake glycogen. Okuthuthukisiwe izakhiwo colloidal of Bile, uvikelwe kumiswa amatshe atholakala enyongweni, evamile contractile umsebenzi we gallbladder.
Ngenhloso zokwelapha ukuthatha imithi "Liv.52" ngaphambi kokudla. Izingane Ezisathomba engaphezu kwengu-14 ubudala kanye nabantu abadala kufanele baphuze amaphilisi 2 kane ngosuku noma 1-2 amathonsi itiye-spoon izikhathi 3 ngosuku. Izingane ezivela engu-5 ukuya 14 zithatha kathathu ngosuku 1-2 amaphilisi, noma 10-20 amaconsi izikhathi 2-3 ngosuku. Kuyoze kuhlale imithi oyinikiwe, udokotela enquma umuntu ngamunye kuye ngohlobo nobukhali sifo.
Lapho kunqotshwa kwesibindi ngotshwala ukuthatha 2 amaphilisi izikhathi 3 ngosuku ngenyanga ke izinyanga 6-12, thatha 1 st ithebhulethi kathathu ngosuku.
Ngokuba nokuvimbela imithi ukusetshenziswa "Liv.52 'emva kokudla kabili ngosuku, amaphilisi 2.
Side Effects "Liv.52" kusho
Uphenyo kodokotela kanye neziguli khombisa kusebenta izidakamizwa, kodwa kungase futhi nemiphumela engemihle emzimbeni, esizibonakalisa wokugaya ukudla uhlelo neziyaluyalu, nokungezwani komzimba nezinto. With ukuthuthukiswa yimuphi ukusabela ezingezinhle Kufanele uxhumane onguchwepheshe okunye ukwelashwa.
ukusetshenziswa isikhathi eside futhi kabi lezi izidakamizwa ayinakho anobuthi imiyalelo umphumela umthamo.
Medicine "Liv.52" alisetshenziswa ukwelapha ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyisihlanu yobudala, naphambi ukungabekezelelani ngazinye izingxenye ezihlukene izidakamizwa.
Phakathi nokukhulelwa kanye lactation
Abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa noma ukuncelisa ingane Wamukele "Liv 52" contraindicated, njengoba idatha ku ukuphepha usebenzisa le imithi ngalesi sikhathi akukho.
Qiniseka ukuthi utshele udokotela wakho uma imithi oyiphuzayo, bese nixoxa kungenzeka ngokusebenzisa izidakamizwa "Liv 52".
Ukusetshenziswa ahlangene izidakamizwa ibuprofen futhi kuholela ukuncela ukubambezeleka zokugcina futhi kuzonciphisa izinga layo emzimbeni. Nakuba isicelo yayo nge izidakamizwa ezifana "Doxycycline" futhi "tetracycline," Imithi elwa namagciwane bioavailability incipha.
Qiniseka ukuthi uthintane onguchwepheshe ngaphambi kokuthatha imithi "Liv.52". Uphenyo odokotela ukuqinisekisa ukuphepha lokhu izidakamizwa: ingxenye akukho izidakamizwa notshwala; nomthelela okuhlushwa, yokusabela isilinganiso, ikhono usebenze izimoto noma ezinye imishini ke abuzange.
Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe izidakamizwa
Cishe zonke ekhemisi ukuthenga imithi "Liv.52". Inani lentengo lomuthi ungaphakathi uhla ruble 180-250 ngamaphilisi 100. Umuthi okuthengiswa ngaphandle kadokotela.
Gcina imithi "Liv.52" kufanele bavikeleke ukukhanya futhi epholile, endaweni eyomile aphume kude nezingane. Amazinga air egumbini lapho nomuthi iwukuba ube sendaweni + ayi-10-30 ° C. Amaconsi akumele simisiwe.
Impilo eshalofini zomuthi kuyinto engu-3. Ngemva kwalokhu imithi kwi isembozo ayikwazi ukusetshenziswa isikhathi. Okuhle kakhulu yokwamukela ngeke abe nomphumela ofiselekayo, futhi neze, udale umonakalo omkhulu emzimbeni.
Ngeshwa, zikhona izikhathi lapho ekhemisi ngaphandle izimali ungakwenzi kanye isimo eziwohlokayo kwemvelo unyaka ngamunye, ijubane zokuphila kwanamuhla futhi imikhuba emibi iphendukele ukusetshenziswa kwemithi ngokuvamile kakhulu ezidingekayo. Nokho, ungalokothi self-medicate, ukwabela ngokwayo imithi ethile. Loku kungenteka kuphela kube kubi nakakhulu. Ukwemukelwa noma yimuphi umuthi, kuhlanganise imithi "Liv.52" Kufanele umise kuphela uchwepheshe abanolwazi, esekelwe izici ngamunye umzimba nokugasela ngamandla kwalesi sifo.
Umuthi 'Enap-N' - izici isicelo
Umuthi 'Galstena ". imfundo
Prince Mal Drevlyansky. Prince Igor no-Prince Mal
"Aesculapius" - isikhungo wezokwelapha. Ochwepheshe kanye isikhungo Izibuyekezo
Ukuhlaziywa Literary: inkondlo Pushkin sika "Echo"
Zingobani 'Bears Kuznetsk "?
Ejenti Hemostatic at amakhambi nyangazonke noma abantu?